अष्ट्रेलियामा भाँडा टल्काउँदैछु : विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०७:०८ |
११ बर्षमा साइकलबाट संसारलाई साढे पाँच फन्को लगाएर नेपाल फर्केर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको ७ बर्ष बितेछ। यात्रा सकेर नेपाल फर्केको ७ बर्षपछि मेरो देशको सरकार प्रमुखलाई भेट्ने सुअवसर मिल्यो । सम्माननीय ज्युको स्वकीय सचिवले मेरो परिचय गराउनुभयो।
” ए पुष्करजीलाई त म चिनीहाल्छु नि” सम्माननीयले गर्वसाथ बोल्नुभो । म खुशीले गदगद भएँ ।
“अनि भन्नुस् पुष्करजी ! ”
सम्माननीयको आग्रहले म बोलें । ” जीवनका स्वर्णिम बैंसहरु, ११ वर्ष, ४०१५ दिन , दुई लाख एक्काइस किलोमिटर, साइकलको पांग्रा माथी जीवन र मेरो देशको झन्डा बोकेर १५० देश संसारलाई साढे पाँच फन्को ! त्यसपछि संसारभरिको झन्डा बोकेर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड बनाएँ । ”
” अनि ?” सम्मानीयले सोध्नु भो !
” ‘संसारलाई साढे पाँच फन्को’ पुस्तक लेखें ”
“वाउ ! ” सम्माननीय ज्यु दङ्ग पर्नु भो !
” म २०४६ सालको जन आन्दोलनको घाइते पनि हूँ । चैत्र २४ गते दरबारमार्गमा प्रहरीको गोलिले दाहिने हात छेडेर गएको थियो। वीर अस्पतालले मृतक घोषित गरेर मेरो नाम शहिदको सुचीमा छ । ”
भन्दैथें , भन्दैथें , सम्माननीय ज्यु त अघि नै ढलेछन् । स्वकीय सचिव र सुरक्षा गार्डहरुले खै के के सुँघाएर , पानी छर्केर होसमा ल्याए ! मेरो उग्रक्षमता देखेर डराएछन् क्यारे !
” त्यत्रो ४६ सालको योद्धा , जिउँदो शहिद, अहिलेसम्म पार्टीको सदस्यता लिनु भा’को छैन ? ” घर फर्केको साँझ स्वकीय सचिवले मलाई फोनमा सोधे । उनलाई म ४६ सालदेखि नै नजिकबाट चिन्छु । उनै हुन् मलाई गुच्चा र गुलेली बोकाएर जन आन्दोलनमा होमिन सिकाउने !
” देशको झन्डा बोक्नेले पार्टीको झन्डा बोक्दैन ” मैले उनलाई जवाफ दिएँ । त्यसपछि मेरो डुलुवा अनुभव मेरो माटोमा उपयोग नहुने निस्कर्ष निस्कियो ।
आमाले मलाई माटो र पसिनालाई माया गर्न सिकाइन् । म माटोलाई चट्टकै माया मारेर पसिनालाइ माया गर्न हिडें ! अहिले अस्ट्रेलियामा भाँडा टल्काउँदैछु ।
Previousअष्ट्रेलियावासी गायक अविनाश न्यौपाने बक्स अफिस म्युजिक भिडियो अवार्डको नोमिनेशनमा
Nextसुपमा भेटियो मुसा, रेस्टुरेन्टलाई १९ करोड डलर घाटा
७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०२:५३